atgcab, update site Robbo
n'ihi na X-Plane 10.00 +
The ụgbọelu nwere a 3D kokpiiti na a njem ụlọ. Ọ na-abịa anọ liveries - Fokker Heritage Flight, Aviaco, Air UK na tat - na a agba kit na ntụziaka. Ọ gụnyekwara a PDF na checklists na ókè. (Na n'ezie F27 mmanụ ụgbọala eruba na propela RPM na-ma họrọ site na "trotul". Ya mere ọ dịghị iche iche RPM akara, otú ị ga-eji F3 / F4 igodo n'ihi na).
The Fokker F27 bụ obere osisi turboprop ugbo elu nke 44 oche ndị e mere na wuru site Dutch emeputa Fokker, e mere iji aga nke ọma na DC-3. The mbụ ụgbọ elu ahụ weere ọnọdụ 24 November 1955. The mbụ oyiri napụtakwara ka Aer Lingus na November 1958.
Onye edemede: atgcab, melite site Robbo